Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Maxaad Kala Socotaa Xaalada Xabsiga Ciqaabta Ee Godey! (Jeel Ogaden Goday).
Maqaal: Maxaad Kala Socotaa Xaalada Xabsiga Ciqaabta Ee Godey! (Jeel Ogaden Goday).
Posted by Dulmane	/ September 17, 2018
Magaalada Goday ee xarunta Gobolka Shabeelle waxaa kuyaala xabsi wayn oo Dhibaato qarsoon ay wali kajirto.
Jeelka ku caan baxay ciqaabta ee magaalada Godey muxuu yahay maxaa lagu matali karaa? waxaad in badan maqasheen Jeel-ogaadeen oo Jigjiga kuyaala miyaad maqasheen Jeelka cadaabka ee ku yaala magaalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeele?
Jeelkan ayaa ah xabsiga 2aad ee wadanka Ogaadeeniya ugu wayn oo sigaar ah loogu hayo dadka shacabka ah ee daga Gobolada Koonfurta wadanka Ogaadeeniya sida Shabeele, Afdheer iyo Liibaan, gaar ahaan waxaa xabsigan lagu xidhaa dadka xuduuda wadanka laga soo qabto.
Xabsigan ayaa loodoortay maamulkii hore ee Cabdi Ileey kuwii ugu naxariista daraa mid kamid ah oo magaciisa layidhaahdo Cabdifataax Muxumed. Ninkan oo kucaan baxay dad-qalatanimo iyo naxariis-daro, musuq-maasuq iyo in ay maxaabiistu baahi iyo macaluul ugu dhintaan xabsigan gudihiisa. Tan iyo hada oo ay dhacday xukumadii Cabdi Ileey dulmigiina ilaahay qaaday, ayaa wali xabsigaas waxaa kujira dad 70 qof kor udhaafaya, kuwaas oo ubadan beeralay masaakiin ah oo xamaalato ahayd oon waxba galabsanin.
Waxaa murugo iyo tiiraanyo leh dadkaa in ay ka mid yihiin kuwo Qur,aanka Kariimka ah xifdisan ahna kuwa tukiya Salaada Taraawiixda bisha barakaysan ee ramadaan balse gaajo iyo nafaqo darro la,indho beelay fadhigana wakhtigan xaadirka ah ku tukada oon tabar iyo taag toona lahayn.
Waxaa jirtay in Madaxii hore ee Liyuu Police, Cabdiraxman Cabdulaahi Buraale (Ina Labo Go’le) uu amar kubixiyay in la siidaayo ama la’cafiyo 70 kaas maxbuus ee jeelka ciqaabta Godey wali ku xidhan balse ninka xabsiga haysta waa CABDIFAT Cabdifataax Muxumed e uu dib ugu celiyay xabsiga, cid kahadlaysana ayna jirin ilaa wakhtigan xaadirka ah.
Hadaan nahay Waxgaradka magaalada Godey waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanaynaa in ay u gurmadaan masaakiintan ku dulman Jeelka Godey!!! lana xisaabtamaan cadaaladana hor-geeyaan dadkii dunuubtan gaystay. Dadkana wixii nool lasoo badbaadiyo. Mar kale waxaan kuwar galinaynaa maamulka cusub ee Mustafa Muxumad cumar uu hogaamiyo in uu u gurmado dadkaas ku dulman Jeelka ciqaabta ee magaalada Godey.
Odayaasha iyo wax garadka magaalada Godey waxay maamulka cusub kacodsanayaan in ay cadaalada hor keenaan dadkii gaystay dhibaatooyinka ee mudada dheer dadka xasuuqayay.
Waxgaradka Magaalada Godey.